Displaying items by tag: lnowledge
"အင်္ဂလိပ် စကားပြော ကျွမ်းကျင်ဖို့သဒ္ဒါ လုံးဝ သင်စရာမလိုဘူးတဲ့လား!"
အင်္ဂလိပ် စကား ပြောတတ်ဖို့ / ကျွမ်းကျင်ဖို့
သဒ္ဒါလုံးဝ သင်စရာမလိုပါဘူး .
သဒ္ဒါမသင်ပဲ ပြောတတ်လာတာပဲ ) ဆိုတဲ့
အစွန်းရောက် အမြင်ရှိသူတွေ များလာတာ သတိထားမိလို့
ဒီစာ ရေးဖြစ်တာပါ ။
အဲ့လို လူတွေကို ဒီမေးခွန်းလေး မေးကြည့်ပါ ။
1. I lived in Yangon for two years.
2. I've lived in Yangon for two years. နဲ့ ဘာကွာလဲ ?
ဆိုတာကို သဒ္ဒါလုံးဝ မသင်ပဲ ဘယ်လို ခွဲခြားမလဲ ?
သဒ္ဒါသင်ထားမှ ခွဲခြားလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူးလားလို့ ။
အဲ့ စကား ၂ ခွန်း ဘာကွာလဲတောင် မသိပဲနဲ့တော့
Speaking ကို မွတ်နေအောင် ပြောတတ်တယ်ဆိုလည်း
ပညာသိပ် မတတ်သူတွေပဲ ယုံပါလိမ့်မယ် ။
" ဒီလူ စကားပြောတာ အရမ်းသွက်တော့ မိုက်တယ် "
သဒ္ဒါလုံးဝ မလေ့လာလည်း ရနိုင်ပါတယ် ။
( ပညာတတ်အချင်းချင်းကြားမှာပါ ချီးကျူးခံရတဲ့ အထိ
ရေရှည် စဉ်းစားထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ )
သဒ္ဒါကို နည်းနည်းချင်းတွဲပြီး လေ့လာထားသင့်ပါတယ် ။
( ဆိုလို ချင်တာက အစွန်းမရောက်ဖို့ပါ ... )
ဒါမှ သာမန်စကားပြောထက် ကျော်ပြီး
ပညာတတ်ဆန်ဆန် ပြောဆို ဆွေးနွေးရာတွေမှာ
Direct Method ဆိုတာရှိသလို
Indirect Method ဆိုတာလည်း ရှိတယ် ...
ဆိုတာလည်း သတိထား စဉ်းစားသင့်ပါတယ် ။
မိခင်ဘာသာစကားကို သဒ္ဒါမသင်ပဲ ပြောတတ်လာဖို့
တစ်နေ့ တစ်နေ့ ထိတွေ့ချိန် ဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရပြီး
ဘယ်လောက်ကြာမှ ပြောတတ်လာသလဲ ?
အဲ့လိုမျိုး တူညီတဲ့ ထိတွေ့ချိန်မျိုး
လောလောဆယ် ကိုယ့်မှာ အဆင်ပြေမပြေဆိုတာကိုလည်း
ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပါမယ် ။
မသိမသာ ပြန်တည့်ပေးသွားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး
သဒ္ဒါကို ကျေညက်အောင် သင်ဖူး လေ့ကျင့်ဖူးပြီး
သဒ္ဒါကို ဘာမှ မသင်ဖူးပဲ တန်းပြီး ( သဒ္ဒါမစဉ်းစားပဲ )
စကားပြောတာမျိုးဟာ မတူပါဘူး ဆိုတာကိုလည်း
သိုင်း စ ကစားရာမှာ လေ့ကျင့်တဲ့အခါ
သိုင်းကွက်တွေနဲ့ အတိအကျ လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး
သိုင်း ကွက် မစဉ်းစားတွေပဲ
အလိုလို တိုက်နိုင် ခိုက်နိုင်သွားတာမျိုးကို
နမူနာယူ စဉ်းစားကြည့်ပါ ။
( ဘာသိုင်းကွက်မှ မသင်ပဲ တိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်သွားတာမျိုးနဲ့
အရည်အချင်း တူမယ် ထင်ပါသလား ? )
ဒါကြောင့် ထပ်ပြောပါမယ် ။
လူလည်း ခြေ ၂ ချောင်း ၊
ကျီးကန်းလည်း ခြေ ၂ ချောင်းပဲမို့ တူတူပဲလေ ဆိုတဲ့
ကျီးကန်း လော့ဂျစ်မျိုး လောက် ပဲ မစဉ်းစားပါနဲ့ ။
အစွန်း မရောက်ပါနဲ့ ။
စကားပြောလေ့ကျင့်ရာမှာလည်း သဒ္ဒါကို တွဲလေ့လာပါ ။
Direct Method နဲ့ လေ့လာရမှာ ကြောက်နေရင်တောင်
Indirect Method နဲ့ လေ့လာတတ်အောင်
သူ့ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက် ကိုယ်စီရှိတယ် ။
အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ် ။
လေ့လာသူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား နဲ့
ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် ပေါ် မူတည်ပြီး
လိုအပ်သလို ချိန်ဆ သင်သွားတာ အထိရောက်ဆုံးပဲ ...
ဆိုတာ လက်ခံထားကြတာ များပါတယ် ။
( ဒီနည်းမှ အကောင်းဆုံး ၊
ဟိုနည်းမှာ အကောင်းဆုံး < ဆိုတာတွေက
ကျွန်တော်ကတော့ ယူဆပါတယ် ။
ဘယ်လို ကျောင်းသားမျိုး ဖြစ်ဖြစ်
ငါ့နည်းနဲ့ သင်မှ တတ်မယ် ၊
ငါ့နည်းက အကောင်းဆုံးပဲ ဆိုတာမျိုး ဟာ ...
ဆေးဆရာ လူလိမ် တစ်ချို့ပြောလေ့ရှိတဲ့
ဘယ်ရောဂါနဲ့ လာလာ ဒီဆေးပဲ သောက် ၊
ပျောက်ကို ပျောက်စေရမယ် <
သေချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ် )
အစက တိုတိုပဲ ရေးမလို့ ။
ရေးရင်း ဒီလောက်ထိ ရှည်သွားတယ် ။
တကယ်ဆို စကားနဲ့ ပြောမယ်ဆို
ဒီထက် ပြောစရာ ဆွေးနွေးစရာ စဉ်းစားချင့်ချိန်စရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ။
( သူတို့ အားပေးမှုနဲ့
ဈေးကွက် ရအောင် တည်ဆောက်ချင်တိုင်း )
" စကားပြောတတ်ဖို့ သဒ္ဒါသင်စရာမလိုပါဘူးကွာ "
ခပ်လွယ်လွယ် ပြောတာမျိုးတွေ မလုပ်ဖို့ ။
အဲ့လို ပြောသံတွေကြားလာတိုင်း လည်း
ကျွန်တော် အချိန်ပေး ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ် ။
ဖတ်စေချင်တဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရှိရင်လည်း
လွတ်လွတ်လွတ်လပ် Share ပေးပြီး
ပညာကုသိုလ် ယူနိုင်ပါတယ် လို့ ...
တွေ့သောပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ "
2. I've lived in Yangon for two years. နဲ့
ဘာကွာလဲ ? ဆိုတာကို
လေ့လာသူတွေ အတွက် အတို ရှင်းပြပါမယ် ။
အခု ၂၀၁၉ ဆိုပါစို့ ။
လူတစ်ယောက်က ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၁၇ ထိ
1. I lived in Yangon for two years. < ကို သုံးရပါမယ် ။
အခု ၂၀၁၉ ထိ ( ၂၀၁၇ က စပြီး ) နေခဲ့ ၊
2. I've lived in Yangon for two years. < လို့
Past Tense နဲ့ Present Perfect Tense
ကွာခြားချက် တစ်ခုပါလို့ ။
crd; ကိုဇင်ဇေ( Active English သင်တန်း တည်ထောင်သူ၊ သင်ကြားရေးဆရာ )